Ithegi: ukuphuma kweselfowuni | Martech Zone
Maka: ukuphuma kweselfowuni
Iimpawu zoYilo ezi-5 eziSebenza ngokuGuqukayo ngeFowuni
NgoMvulo, Julayi 17, 2017 NgeCawa, uJuni 10, 2018 Douglas Karr
Ngaphandle kokunyuka kokusetyenziswa kwefowuni, uninzi lweewebhu zizisa amava asezantsi okunyanzela abathengi ukuba babe ngaphandle kwesiza. Abanini bamashishini abafunde kuphela ukuhamba kwindawo yedesktop bakufumanisa kunzima ukwenza utshintsho kwiselfowuni. Ukufumana ubuhle obulungileyo bodwa kunokuba yingxaki. Abanini bamashishini kufuneka basebenze nzima ukuze baqonde abo kujoliswe kubo kwaye bakhe uyilo kunye noyilo macala omntu womthengi. Ukubhenela kubathengi abanokubakho kuhlala kulula
NgoLwesibini, Juni 13, 2017 NgoMvulo, Juni 12, 2017 UTom Mucklow
Ngokuka-Statista, kwi-2016, i-177.4 yezigidi zabantu basebenzise izixhobo zeselfowuni ukuthenga, ukwenza uphando kunye nokukhangela iimveliso. Eli nani liqikelelwa ukuba liza kufikelela phantse kwizigidi ezingama-200 ngo-2018. Kwaye ingxelo entsha eqhutywa ngu-Addressy icacise ukuba ukushiywa kwenqwelo-moya kuye kwafikelela kumyinge wama-66% e-US. Abathengisi abakwi-Intanethi abangaboneleli ngamava amahle eselfowuni banokulahleka kwishishini. Kubalulekile ukuba bagcine abathengi babo babandakanyeke kuyo yonke inkqubo yokuphuma. Apha ngezantsi